ग्यास्ट्रिकको समस्या छ ? भूलेर पनि नखानुहोस् यी खानेकुरा, नत्र हुन्छ अल्सर र क्यान्सरको जोखिम – Annapurna Daily
On Dec 10, 2021 2,222
काठमाडौं । “भनिन्छ हरेक नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक छ ।” खानपान गर्ने तरिका नमिल्दा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्छ। ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ। यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय नखाँदा पेट पोल्ने, खान मन नलाग्ने, ढ्याउ ढ्याउ आइरहने लगायत समस्या देखिन्छन् ।
ग्यास्ट्रिकको कारण पाचन प्रणालीमा पनि बाधा उत्पन्न गराउँछ । जसले गर्दा शरीरमा रगत, क्याल्सियमलगायत कमी हुन जान्छ। यसको समयमै उपचार नगरेमा पेटको अल्सर र क्यान्सर नै हुन सक्छ । त्यसैले ग्यास्ट्रिक भएका व्यक्तिले खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । ग्यास्ट्रिकको समस्या हुनेहरुले भुलेर पनि यी खानेकुरा नखानुहोला ?
एसिडिक खानेकुरा: कागती, सुन्तला, निबुवा, भोगटे आदि फल पर्छन् । यस्तो समस्या भएकालाई टमाटरले पनि थप असर पुर्याउने चिकित्सक बताउँछन् । दूध र दूधजन्य पदार्थ: ग्यास्ट्रिकको समस्या भएकाले दूध र दूधजन्य पदार्थ प्रयोग नगर्दा राम्रो हुन्छ । तर, दही भने फाइदाजनक हुन्छ।
मदिरा: नियमित रूपमा मदिरा सेवन गर्दा पनि ग्यास्ट्रिकको असर झन् बढेर जान्छ। चिया र कफी: ग्यास्ट्राइटिसबाट पीडित मानिस चिया र कफीबाट पनि बच्नुपर्छ। चियापत्ती र कफीमा हुने क्याफिनले ग्यास्ट्राइटिसको असरलाई बढाउने काम गर्छ। अझ दूधचिया खाँदा दूध र क्याफिन दुवैले ग्यास्ट्राइटिसलाई झन् बिगार्ने काम गर्छ। तर, ग्रिन–टीको सेवनले भने ग्यास्ट्राइटिसको सम्भावना ४० प्रतिशत कम गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।
त्यसैले सेतो पाउरोटी, पास्ता, चिनीयुक्त खाद्यपदार्थ चिसो पेय पदार्थ (इनर्जी ड्रिंक्स), प्रशोधित वनस्पति तेल, तेलमा तारिएका खानेकुरा, प्रशोधित मासु (ससेज, ह्याम), ट्रान्स फ्याटलगायत खानेकुरा प्रयोग गर्नुहुँदैन।
नियमित र स्वस्थ खानेकुरा तथा सहि किसिमको आहारव्यहारका कारण तपाईको शरिरमा रोग लाग्दैन। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। झिलीमिली कागजमा बेरीएका जंक फूडले हड्डी नै खियाउने जस्ता समस्या निम्त्याउँछ। ग्यास्ट्रिकबाट बच्नका लागि ग्रीन टीको अवधारणा आएको छ।
पुदिनायुक्त हर्बल चिया पिउँदा यसले ग्यास्ट्रिक कम गर्दै लैजान्छ । र, बिहान उठ्नासाथ पानी पिउँदा पनि केही मात्रामा ग्यास्ट्रिकबाट बचाउन सक्छ ।
यस्तै समयमा खाना खाना खाने हो भने ग्यास्ट्रिकबाट बच्न सकिन्छ । यदि ग्यास्ट्रिकबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने मसला, अचार र तेल भएको खाने कुरा पनि कम खान डाक्टरले सल्लाह दिँदै आएका छन् । जति बाँच्छौँ स्वस्थ्य भएर बाँचौँ ।